Dhibanayaasha tallaalada tijaabada ah ee Brazil – JucelinoLuz
Dhibanayaasha tallaalada tijaabada ah ee Brazil
Riix linkiga hoose, daawo oo dhegayso muuqaalka ka hor inta aanay tirtirin – dambiyada ka dhanka ah bini’aadmiga iyo dembiyada caafimaadka bulshada ayaa laga qarinayaa dadweynaha adduunka. Waxaan u baahanahay inaan wadaagno, gudbinno xogtan runta ah, ha aamusin, dhibbanaha xiga wuxuu noqon karaa qof qoyskaaga ka tirsan, ama xitaa saaxiibkaa…. Ma ka aamusi karno caddaalad darro badan oo adduunka ka jirta!
Halkan waxaa ah xasuuqii dhabta ahaa, dambiilayaasha tallaalka tijaabada ah.
Muuqaal ka samee dalkaaga oo la wadaag, dad badan oo aan waxba galabsan ayaa dhibanayaal u ah dayaca cilmiga sayniska ee ku xiran siyaasadda – ma shaqeeyaan, waxay dilaan dhalinyarada aan waxba galabsan ee adduunka oo dhan.
Prof. Jucelino Luz, cilmi-baare,. Qoraa , deegaan , hagaha ruuxiga ah iyo dhaqdhaqaaqayaasha
Waathiriwa wa chanjo za majaribio nchini Brazili